Kanti kwemula abanjani? | News24
Kanti kwemula abanjani?
NGITHE ngizimele kulayini wokukhipha amasentshana ebhange ngesonto eledlule ngazithola sengilalele ingxoxo ebiphakathi kodade ababili abebephambi kwami ngibalandela.
Bengizicabangela izinyoni zami ngingaqonde kulalela zindaba zamuntu kodwa ngizithole sengicijise amadletshana ngoba lento abebekhuluma ngayo yinto edala impikiswano enkulu kulezizinsuku.
Omunye walabosisi ubebuza lo omunye ukuthi akezanga ngani ememulweni wakhe owawungempelasonto eyayingokuphela kwenyanga.
Umngani uphendule wathi ubexinwe wumsebenzi futhi ubengeke akwazi ukulova ngoba usanda kubuya elivini. Uqhubeke wathi uzwile ukuthi bekusindwe ngobethole kanti nasebusuku “ziwe” kwaze kwacishe kwasa emnyango.
Indaba iqale ukubhimba ngesikhathi umngani esebuza lo obekade emula ukuthi asengakanani amawele akhe.
Ngaleso sikhathi besesisondele emshinini wemali okwenze ngangayilandela yonke inkulumo, kodwa engisale nakho enkulumweni engiyizwile wukuthi lodade ob ekade emula uzele unezingane.
Wemula kanjani umuntu ozele?
Angisona isazi samasiko kodwa ngokomthetho wesiZulu uma intombazane yemuliswa kusuke kubongwa ukuthi iziphathe kahle iyintombi nto yaze yafika ezingeni elithile ingakaze ihlangane nomuntu wesilisa. Lokhu kufakazelwe nawumalume wami engamshiya le Empangeni kwaZulu engithe mangimbuza ngalensumansumane wathi ngendlela abantu abaphambanisa ngayo izinto kulezinsuku bazibangela bona amabhadi namashwa.
Kusadliwa ngoludala, intombazane ibihlolwa uma izokwemula ukuze kuqinisekiswe ukuthi isaphelele yini.
Kulamalanga abantu sebecabanga ukuthi umemulo uyimpoqo futhi uyisigaba okumele udlule kuso ngisho sewazala izingane inqwaba. Akulona iqiniso leli bakwethu. Abanye baze bathi umendo abawutholi ngoba abemuliswanga.
Uma ufuna ukwemula, ziphathe kahle uzigcine, ungahambi uzithanqaza kubafana ujike uhluphe abazali uthi abakwemulise.
Alikho icala uma ufuna ukwenza umcimbi ubusise izimpintshi zakho ngotshwala nenyama kodwa-ke musa ukubiza lowomcimbi ngomemulo. Thana wenza “i-party.”
Lento ngithi uma ngiyibuka ngiyibone ihambisana naleyo eyashiwo uzakwethu uSibongiseni “Ntshebe” Shangase emasontweni ambalwa edlule lapho abhala wathi abantu ngedlela abangasazazi ngayo izinto, bagcina sebekhipha imali kulotsholwa abangangayazi nokuthi ngeyani leyomali abayikhiphayo.
Kumele uma ulobola wazi ukuthi inkomo nenkomo oyikhiphayo ingeyani. Abantu kwabona abasazazi noma bayathenga noma bayalobola, Sebemane bakhiphe-nje leyomali ebiziwe bebe bethi “balandela isiko.”
Angisho-ke njalo ukuthi ningasangimemi uma “nemula” noma “nemulisa.” Ngeke ngihlale ngingezi uma kunejiki lamahhala nenyama ilahlile.
Kuphela yithi wenza “i-party” ungasho ukuthi wenza umemulo